Bọchị Ndị Ochie nke Obi |tọ | Martech Zone
Sunday, November 11, 2007 Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Douglas Karr
Na 1954, Onye isi ala Eisenhower bịanyere aka na mkpọsa iji wepụta ụbọchị Armistice na Day Veterans Day. Istbọchị Armistice chetara ụbọchị agha ụwa nke mbụ biri. Onye isi ala Ford banyere ụbọchị ahụ na ezumike Federal na 1 na nke mbụ a na-eme ememme Veterans Day bụ 1975. Na 1978, a na-akpọ izu nke Veterans Day ugbu a dị ka Veterans Awareness Week maka ụlọ akwụkwọ iji mee ka a mata onyinye na onyinye nke ndị agha Veterans.
Daybọchị ndị ochie nwere ọdịiche dị iche na ụbọchị ncheta ma na-agbaghakarị ya. Memorialbọchị ncheta bụ nsọpụrụ nke ndị nwoke na ndị nwanyị nyere ndụ ha n'aha mba ahụ. Daybọchị ndị agha na-ahụ maka ọrụ.
Enwere m nsọpụrụ ịnọdụ ala na tebụl na Teknụzụ ya na onye isi oche ọhụrụ nke Indianapolis, Greg Ballard, na Fraịdee. Mụ na Mayor Ballard tụlere ọrụ anyị na Gulf Persia na Desert Shield na Desert Storm. Mayor Ballard bụ onye isi na Marine Corps. Abụ m di na nwunye nke Elektrik na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, ndị Spartanburg County (LST-1192) bụ ndị na-ebu ụgbọ mmiri. M ghọrọ ezigbo ndị enyi na ụfọdụ ndị Corps, ọkachasị di na nwunye EODODE ụmụ okorobịa mụ na ha rụkọrọ ọrụ ruo ọtụtụ ọnwa.
Oringsọpụrụ ndị agha ochie anaghị asọpụrụ agha
Sọpụrụ ndị agha ochie apụtaghị ịsọpụrụ agha. Onweghi onye chọrọ udo karịa Veteran. Biko egbula ndị agha anyị site n'ịghọtaghị ihe ndị ha na-eme maka ezinụlọ ha na obodo ha. Gọọmentị nke ha na-emejọ ha nke ọma - ha achọghị ịnụ ya site n'aka ndị ha wepụtara onwe ha iji chebe - mụ na gị.
Tags: aghaụbọchị ndị ochie
Nov 11, 2007 na 10:48 AM
Daalụ maka ọrụ gị, Doug.
Nov 11, 2007 na 4:52 PM
Ezigbo ozi, Doug! Daalụ maka ihe ncheta ahụ ma daalụ maka ọrụ ị na-arụrụ obodo anyị!
Hey onye ọ bụla, oge ọzọ ị pụtara n'ihu ọha ma hụ onye yi okpu ma ọ bụ jaket ndị agha US, gbagoo, kwee aka ya wee sị, "Daalụ maka ọrụ gị." Ọ bụ obere ngosipụta nke ekele nke nwere ike ime ka onye agha mara na ị nwere ekele maka nnwere onwe ọrụ ha nyere aka ichebe. Kwesighi ikwenye na agha iji nwee ekele maka ndị wepụtara onwe ha na ọrụ.
Daalụ, ndị ochie!
Nov 11, 2007 na 6:13 PM
Daalụ Bo! Daalụ Julie!
Wayzọ ọzọ ndị mmadụ nwere ike isi nyere aka bụ inyere ndị merụrụ ahụ na-alọta aka na enweghị enyemaka ha chọrọ.
Ogbugbu Warrior Project
Nov 11, 2007 na 7:31 PM
Daalụ maka ichetara anyị ịsọpụrụ ndị agha anyị ochie, na ekele gị maka ọrụ.